TORA-BATO AO AMIN’NY TANANAN’I BRICKAVILLE : Mpanao bizina maloto ny ao ambadika
Fiara maro no mbola lasibatry ny tora-bato eny amin’ny lalam-pirenena faharoa tsy lavitra ny tanànan’i Brickaville. 25 octobre 2017
Efa am-bolana maro izay ary tsy mety mifarana hatramin’izao. Ny zoma 20 oktobra tokony tamin’ny 10 ora sy sasany alina, dia fiara iray indray no niharan’ny tora-bato teo am-pidirana ny tanànan’i Brickaville. Vokany, vaky ny fitaratra.
Taorian’io fiara kely io, dia fiara be iray indray no voa. Na efa nisy aza ny fahatratraran’ny zandary an’ireo andian’olona sasany mpitoraka fiara, dia tsy mety rava ny tambajotra mpanao azy. Ny fanadihadiana natao tamin’ny zanaky ny distrikan’i Brickaville maromaro no nahalalana fa vokatry ny tsy fitiavan’ny olona ny lehiben’ny borigadin’ny zandary ao an-toerana no anton’io tora-bato io. Izay kaomandin’ny borigady miady amin’ny bizina maloto ao Brickaville, dia misy andian’olona sasany ao an-toerana ihany no mitady ny fomba rehetra hanaisorana azy eo amin’ny toerany.
Korontanina ny lalam-pirenena faharoa entina handotoana ny kaomandin’ny borigadin’ny zandary. Lasa malaza ratsy hatrany mantsy i Brickaville ka miroso amin’ny fanoloana olona ny fanjakana foibe.Tsy ny borigadin’ny zandary ao Brickaville amin’izao fotoana izao ihany no fantatra fa efa lasibatr’io fihetsika io fa efa maromaro izay. Izay kaomandin’ny zandary mikitika ny mpibizina halatra solika sy famakiana kaontenera amin’ny lalam-pirenena faharoa ao anatin’ny distrikan’i Brickaville dia tsy maintsy misy andian’olona migafy.
Ho an’ireto zanak’i Brickaville tsy nitonona anarana, naneho hevitra ireto, dia olona voairaka avokoa no ao ambadik’io tora-bato atao amin’ny fiara saika ho isak’alina io. Tsy mba manakan-dalana izany mantsy ireo mpanao azy fa fitaratra vaky ihany no tanjona.
Mahatratra 4 hatreto ireo jiolahy voasambotra, mbola mitohy ny fanadihadiana
Araka ny loharanom-baovao dia fantatra fa fiara am-polony eo no niharan’ny fandrobana tato anatin’iray volana. Toy ny zava-niseho vao tamin’ny faran’ny herinandro izao dia fiara lehibe nitondra kaontenera misy simenitra indray no lasibatra tamin’izany. Niainga avy any Toamasina ity fiara ity ka lalana 5 kilometatra tsy hiditra an’i Brickaville no nanomboka nisy namaha an-tsokosoko teny am-pandehanana ny varavaran’ilay fiara.
Navoakan’ireo mpangalatra tsikelikely ka tafavoakany ny simenitra miisa 24 tao anatiny. Nahazo vaovao mikasika izany tamin’ny alalan’ny nomerao maitso119 ireo zandary avy amin’ny Borigady any an-toerana ka namonjy haingana hizaha ny trangan-javatra. Avy hatrany dia nanao ny fikarohana ireo mpangalatra izy ireo ka olona iray mbola mihosotra simenitra no nosamborina. Tafaporitsaka kosa ny telolahy ambiny. Mbola tratra nivangongo teo an-tsisin-dalana ny simenitra 17 gony. Izany hoe olona miisa efatra hatreto no voasambotra.
Efa eo am-panaovana ny fanadihadiana ankehitriny ireo mpitandro filaminana ao amin’io toerana io. Marihana fa tsy mandry fahalemana intsony any amin’ity lalam-pirenena ity ary karazana tranga maro samihafa izay no nisy andro vitsivitsy nifanesy.
Fiara tsy mataho-dalana roa nisy nitoraka
Nandritra ny fotoana nialan’ireo zandary maromaro namonjy ny trangana fanakanan-dalana tamin’io faran’ny herinandro io hatrany dia nisy olona tsy fantatra, nitoraka ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana roa izay nandalo ny tanàna ka nahavaky ny fitaratr’izany. Rehefa nohadihadiana anefa ny mponina teo amin’ny manodidina dia lehilahy marary saina iray no hitan’ny olona avy nitoraka fiara teo ka rehefa norarana dia tezitra ary nanenjika olona tamin’ny antsy.
Niditra tao an-tranon’olona iray ity voalaza fa adala ka nandratra tovolahy iray 17 taona izay efa nampidirina hopitaly sy efa nahazo fitsaboana. Nandositra io marary saina io amin’izao fotoana izao ka nisy ny fiaraha-mientana amin’ny fikarohana azy iarahan’ny fokonolona sy ny zandary. Tsiahivina koa fa vao tamin’ny faran’ny volasa septambra teo no tratran’ny zandary tao Brickaville ny lehilahy iray teo am-pitorahana fiara nandalo ka efa tafiditra am-ponja vonjimaika taorian’ny famotorana azy.
Efa manao izay ho tratrany ny zandary amin’ny fiarovana ireo mponina sy ny mpampiasa lalana amin’ny fisafoana sy ny fiambenana kanefa raha mahazo vaovao eo no ho eo toy ny tamin’ity indray mitoraka ity hatrany izy ireo dia hihena na ho foana mihitsy ny tsy filaminana. Andrasana ny fivoaran’ny fikarohana ireo jiolahy mpanao ity fanakanan-dalana miharo hetraketraka ity hatreto ka miezaka manome vaovao hatrany ny eo anivon’ny mpitandro filaminana.
Nangonin’i Kamy & Tatianà R.